My Cafe — Restaurant game APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အကြှနျုပျ၏ကဖေး - စားသောက်ဆိုင်ဂိမ်း
အကြှနျုပျ၏ကဖေး - စားသောက်ဆိုင်ဂိမ်း APK ကို
ကမ္ဘာတဝှမ်းထက်ပို 50 သန်းကော်ဖီချစ်သူများ join နှင့်ဤ FUN ၌သင်တို့၏စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဝိညာဉျကိုတိုက်ဖျက်မည်နှင့်စားသောက်ဆိုင်ဂိမ်းလျှော့ပေါ့။ သငျသညျအော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေလျှင်ပင်, သင့်ဖီးသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာအပေါ်ဆုံးဖြတ်နှင့်ဝင်ငွေဝင်ငွေ!
စားသောက်ဆိုင် GAME Simulator
•သင်ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့သင်တို့မထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းဖီး menu ကိုပစ္စည်းများနှင့်ပင်အစုံစျေးနှုန်းများအပေါ်ဆုံးဖြတ်, ဝန်ထမ်းငှားရမ်းခြင်းနှင့်မီးရထား, သင့်ကော်ဖီဆိုင်ကိုအလှဆင်
•သင်ဒီဇိုင်းတစ်ခု knack ရှိပါသလား? သင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှု Hone နှင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းကဖီးသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများပြုပါ
•သင်ဆန္ဒရှိအတိုင်းဤချက်ပြုတ်ဂိမ်းထဲမှာသင်မြောက်မြားစွာပုံစံမျိုးစတိုင်များထံမှအနေအထားပရိဘောဂရှေးခယျြနိုငျ, သင်၏စကားမှန်မိမိကိုယ်ကိုပြသသောဒြပ်စင်များနှင့်အတူအလေးအနက် ပြု. ကကော်ဖီဆိုင်လုံးဝဥစ္စာအောင်
သင့်ဆိုင် interactive STORYLINES
•စစ်မှန်သောကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်, သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုနောက်ခံမှသင်၏ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရသူတို့ကိုဘဝကတဆင့်လမ်းညွှန်ကူညီရလိမ့်မယ်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်ဂိမ်းထဲမှာသင်ကဖောက်သည်များနှင့်အတူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများအကြားကောက်နှင့်သင့်ပုံပြင်ကိုသင်ကြာဘယ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်!
•သင်ဒရာမာကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? အချစ်ဇာတ်လမ်း? အကြှနျုပျ၏ကဖေးမှာရှေးခယျြမှုအားလုံးဥစ္စာပါ!
MY Caféနဲ့အတူလူမှုရေး GO
•သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူငါ၏အဖီး Play နှင့်မြို့နယ်များဖွဲ့စည်းများနှင့်အခြားကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်တူစိတ်ကော်ဖီချစ်သူများတွေ့ဆုံရန်
ကော်ဖီနှင့်Café Mania: သင်ကြှနျုပျတို့ပွုသလောက်ကော်ဖီကိုချစ်သလား?
•သင့် Barista စူပါပါဝါတိုက်ဖျက်မည်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသင့်ရဲ့ဧည့်သည်ထုံးစံကော်ဖီနှင့်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖန်တီး
•ထူးခြားသောကော်ဖီချက်ပြုတ်နည်းများ Unlock နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကော်ဖီသောက်ပေါင်းစပ်နှင့်သင်၏ဖီးအတွက်လူတိုင်းရဲ့ဘဝတက်မြိန်
အကြှနျုပျ၏ကဖေး: ချက်ပြုတ်နည်း & ပုံပြင်များကို download လုပ်ပါနဲ့ပေးဆောင်ဖို့မတာဝန်ဝတ္တရားနှင့်အတူဆော့ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ In-ဂိမ်းပစ္စည်းများအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကို disable လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါက, In-app ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင်ဝယ်ယူမှုကို turn off ကျေးဇူးပြုပြီး
Facebook မှာ - http://www.facebook.com/MyCafeGame
ကစားသမားများအဘို့ + 8 မြင့်:
နက်နဲသော, ထူးခြားတဲ့အလှဆင်, ဝတ်စုံနှင့်လက်ဆောင်များနှင့်အတူသစ်ဖြစ်ရပ်ဇာတ်လမ်းကို "ရတနာ Hunt က" •
•ကို Magic ရာသီ - ထို Crystal ပိရမစ်ကနေပိုပြီးစိန်!
Lucky အဆိုပါ Bunny (လိုအပ်တဲ့အဆင့်ကို9+) နှင့်အတူနယူးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းအဆင့်ဆင့်။
ကစားသမားများအဘို့ 34 မြင့်:
•သင် 35 မြင့်ရလိမ့်မည်ဟုအသစ်နှစ်ခုပုံပြင်များ
• Supercupcake Display ကိုဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အဆင့်တွင်အသစ်အချက်ပြုတ်နည်းများ 35
128.49 ကို MB